Villa Somalia oo aad kaga walaacsan Halis ka daran Shabaab oo lagu arkay Muqdisho.. | Allbanaadir News
Villa Somalia oo aad kaga walaacsan Halis ka daran Shabaab oo lagu arkay Muqdisho..
Warar hoose ayaa sheegaya in Dowlada Soomaaliya ay walwal aad u xoogan ka muujineyso Weerarada Dilalka ah oo Kooxda Daacish ay ka geysato Magaalada Muqdisho oo kordhay.
Sarkaal ka tirsan Madaxtooyada Soomaaliya ayaa inoo sheegay in Taliyayaasha Ciidamada kala duwan ee Dowlada Soomaaliya ay kulan gaar ah Madaxtooyada Soomaaliya kula yeesheen Xubno ka socda Beesha Caalamka oo si gaara Dowlada Federaalka kaga taageera Howlgalada ay fuliyaan Ciidamada.
Kulankan ayaa si weyn loogu falanqeeyay qaababka ay Dowlada kaga hortagi karto weerarada siyaaday oo Daacish ay ka fulinayaan Soomaaliya, iyadoo Dowlada Federaalka ay codsatay in laga taageero dhinaca Sirdoonka.
Wargeyska Long War Journal ayaa daabacay in ay sare u kaceen weerarrada Ururka Daacish uu ka geysto magaalada Muqdisho.
Warbixinta uu daabacay Wargeyska ayaa lagu sheegay Daacish laanteeda Soomaaliya ay sare u qaadday weerarrada ay ka geysato Muqdisho waxaana ay sheegteen weeraro dhowr oo biliihii ugu dambeeyay ka dhacay Magaalada Muqdisho.
Warbixinta Wargeyska waxaa lagu sheegay in sanadkan 2018, Ururka Daacish uu 13 weerar lka fuliyay Soomaaliya,weerarradaas waxaa ay ka badanyihiin kuwii ay fuliyeen 2016 iyo 2017,sida ay baahisay xogta keydka ee Acmaaq oo soo bandhigtay kiisaska weerarrada ee Soomaaliya.
Dilalka qaar ee ay Daacish geysato waxaa ay marka ay baahinayaan warbaahintooda raaciyaan sawirro,Muuqaallo iyo mararka qaar cod ama maqal si ay u caddeeyaan in iyaga ay ka dambeeyeen falkaas.
SIDEE LACAG LOOGA HELAA FACEBOOK DAAWO MUUQAALKA ﻿